URosslee useyishiyile iMoroka Swallows - Umbiko | News24
URosslee useyishiyile iMoroka Swallows - Umbiko
Johannesburg - Sekuvele imibiko ethi umqeqeshi uCraig Rosslee unqume ukushiya iMoroka Swallows ngoba akazimisele ukuya naleli qembu kuNational First Division.
Lokhu kuza ngemuva kokuthi ehlulekile ukuhlenga iSwallows ezembeni kanti umphathi wakhe uLeon Prins useqinisekisile ukuthi lo mqeqeshi, 45, uyahamba kuleli qembu.
OLUNYE UDABA: Usahleli ekhaya namanje uRosslee
"Besithanda ukumgcina ngoba besibona sengathi ubukhona umehluko kusukela athatha izintambo," kusho uPrins etshela iKickOff.com.
"Kepha ukhethe ukushiya kanti kumanje simatasa sixoxisana nabanye abaqeqeshi. Sizokwenza isinqumo uma sesiphothule konke."
ISwallows iphinde yalahlekelwa uVuyisile Wana noLentshene Phalane abaye ku Bloemfontein Celtic.